Samsung Galaxy S2, oo ah taleefoonka casriga ah ee leh qalabka sawirada ugu dhaqsaha badan | Androidsis
Taleefanka gacanta ee Samsung Galaxy S2 wuxuu noqon lahaa taleefanka casriga ah ee wata qalabka ugu dhaqsaha badan sawirada suuqa, sida lagu sheegay daraasad ay soo saartay shirkadda Anandtech.
Shirkaddu waxay ammaaneysaa qalabka wax lagu sawiro ee Mali-400 ee Samsung Galaxy S2 smartphone iyadoo la kaashaneysa processor-ka 4210 GHz Exynos 1.2, kaasoo "leh waxqabad aan caadi ahayn."
Daraasadda ayaa sidoo kale muujisay in Samsung Galaxy S2 ay kaliya kaga sarreeyaan qaybtan kiniiniga Apple ee iPad 2, laakiin waxaan ka hadlaynaa nooc kale oo qalab ah oo aan ahayn taleefan casri ah, taas oo macnaheedu noqon doono in Galaxy S2 uu yahay taleefannada ugu dhaqsaha badan uguna waxtarka badan. suuqa.
Marka loo eego natiijooyinka shaqada ay fulisay shirkadda Anandtech, waxa ka dambeeya taleefannada casriga ah ee Samsung Galaxy S2 waa Samsung Infuse 4G, kiniiniga Samsung Galaxy Tab 10.1, LG mobile Optimus 3D, Samsung Samsung Nexus S smartphone iyo Apple iPhone 4.
Waa maxay ra'yigaaga ku saabsan natiijooyinka daraasaddan Anandtech?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S2, taleefanka casriga ah ee wata qalabka garaafyada ee ugu dhaqsiyaha badan
Hagaag, waxba maahan, maadaama aad soo saartay processor -ka iPad 2, kaliya ka faallood sida Iphone 5 uu u keeni doono (uma malaynayo inay mid cusub ka soo saari doonaan gacantooda, laakiin taasi waa), hardware graphic »G S2 wuxuu socon doonaa bil kale.
Ka jawaab Ksi
Isugeyn, maxaa kale oo processor-ku leeyahay? Ilaa iyo inta ay leedahay tufaax gadaal rinji, qaar badan ayaa ku filan
Iyo in badan oo ka mid ah inay dhaleeceeyaan sabab la'aan.
Maxay ku adagtahay dadka qaarkii inay inbadan arkaan tufaaxa ehhh !! ??.
Gabdhaha taleefanka ka dambeeya, iyaguna iib ma yihiin? XD
isha, dhammaadka sanadka processor-ka cusub ee Nvidia, 4 koor, ayaa la iibinayaa. Tani waa waali, dhaqso ayey u socotaa.
Waxaan haystaa Galaxy S 1 aad ayaanan ugu qanacsanahay, laakiin waxaan sugi doonaa inaan beddelo.
wax aan dhahayo taleefanka casriga ah ee ugu fiican qalabka ugu fiican ... oo aan xitaa iftiimin tufaaxa .. hahahaha
waa nolosha ... hahahaha
Ka jawaab kRISSONE
Hagaag, waxba, ksi, tan iyo markii aad soo saartay iphone5, dhowr bilood gudahood nexus prime waa la soo deyn doonaa, sidaa darteed taleefanka casriga ah ee wata qalabka garaafka ee ugu dhaqsiyaha badan ayaa iphone5 socon doona dhowr bilood.
Waxaan aad u xiiseynayaa inaan arko waxa ay dib ugu soo ceshanayaan tufaaxa ifone5… widgets? Ogeysiisyada baarka ?? : /
Ka jawaab ndr
Waxaan haystaa ipad2 iyo galaxy2 waana inaan idhaahdaa labadoodaba waa wax lala yaabo waxqabadka, in kasta oo ipad-yada qaar ka mid ah ay yihiin wax aad loola yaabo. Waa wax cajiib ah in qalabkani uu dhaqaajin karo geesiyaal aad u fara badan oo qabaw qabow leh isla markaana aan kululeyn aaladda aad u badan (galaxy2 wax badan oo ka mid ah ciyaaraha qaar laakiin waxaan ku haystaa 1400mhz).
Marka laga hadlayo iphone5, uma maleynayo in cufka ipad2 (A5) uu isku mid yahay. waxay noqon doontaa A5 la gooyey. Ma ahan sababtoo ah ma awoodid, laakiin maxaa yeelay, xitaa iyadoo shaashadda 10-inji ah, ipad2 wuxuu leeyahay 5000mA batteri ah. in A5 loo dhigo iphone-ka wax aan macquul aheyn maanta ayeey u tahay isticmaalka korontada awgood. Kuma shubi kartid qashinkaas batari 1500mA ah maadaama batteriga uusan socon doonin wax ka badan 1 saac.
Waxaan ku qanacsanahay inay noqon doonto nooc ka mid ah A5 oo la jarjarey oo yeelan doona waxqabad la mid ah galaxy2.
Mawduuca tegra3, shakhsiyan waan u arkaa mid aad u cagaaran.
Nexus Prime, marka loo eego qeexitaannada, wuxuu noqon doonaa mobiil sidoo kale aad ugu eg kuwa aan kor ku soo sheegnay laakiin leh shaashad cajaa'ib leh (amoled hd)